क्रिसलर बिल्डिंग - यो न्यूयर्क मा एक प्रसिद्ध स्किस्क्रिप्ट छ, जो मैनहट्टन को द्वीप मा उगता छ। यस ढाँचाको उचाई 319मीटर छ। र यो 11-महिनाको स्किस्क्र्यापर विश्वमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इमारतको रूपमा मानिन्छ, साम्राज्य राज्य भवन निर्माण नभएसम्म।
तर न केवल यसको प्रभावशाली आकार क्रिसलर भवनको लागि प्रसिद्ध छ। उहाँ आफ्नो कलात्मक गुणको लागि प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। यो भवन कला डेको वास्तुकलाको उत्कृष्ट उदाहरण हो । आधुनिक आर्किटेक्टहरूले यो भवनलाई न्यूयर्कको भवनहरूमा सबैभन्दा सुन्दर मानिन्छ। हामी क्रिसलर भवन र साधारण अमेरिकीहरूलाई माया गर्छौं।
इतिहास र प्रसिद्ध स्किस्क्रैपर को डिजाइन
कम्पनीको "क्रिसलर" को निर्माण 1930 मा बनाइएको थियो। यो लेक्सिंगटन एवेन्यू र 42nd स्ट्रीट को चौराह मा मैनहट्टन आइल्याण्ड को पूर्वी भाग मा स्थित छ। तर आज कम्पनी "क्रिसलर" स्किस्क्रैपरको मालिक होइन। अब यो दुई कम्पनीको स्वामित्व छ: 25% टाशमान स्पीयर गुणमा दिइएको छ, 75% TMW रियल एस्टेटको हो।
भवनको डिजाइन आर्किटेक्ट विलियम वेन हेलेन द्वारा गरिएको थियो। डिजाइन कार्य पूरा भएपछि, क्रिसलर बिल्डिंग वाल्टर पी। क्रिसलर द्वारा किनिएको थियो। इमारत एक फास्ट गतिमा बनाइएको थियो - हप्तामा चार फर्श। बिल्डर्सहरू छिटो छिटो संसारमा सबैभन्दा ठूलो स्किस्क्रैपर निर्माण गर्न।
त्यस समयमा, सबैभन्दा ठूलो भवन वास्तुकार क्रेग सर्जेंस थियो। अब यो ट्रम्प बिल्डिंग भनिन्छ। जब स्किस्केरा वान एलेना को पुनर्निर्माण भयो, तब ऊँचाई मा यो क्रेग सेवेंसेंस को संरचना को बराबर भयो। तर जब सेनसेन्स हेलनको भवनको उचाईमा पूर्णतया राम्रो तरिकाले जान्दथे, उसले तुरुन्तै केहि फन्ट आफ्नो ढाँचामा थप्यो र विश्वको सबैभन्दा लामो भवनको शीर्षक उनको पछि लागे ।
तर वैन हेलेनले आफ्नो प्रतिद्वंद्वितामा उप्रान्त गर्न चाहँदैनन्। उनले भवन निर्माणको छतमा 38 किलोमिटरमा स्क्वायर निर्माण गर्न स्थानीय अधिकारीहरूको अनुमति प्राप्त गरे। र त्यस पछि, न्यूयर्क मा क्रिसलर बिल्डिंग को लगभग एक वर्ष को लागि दुनिया मा सबैभन्दा लामो इमारत को शीर्षक थियो।
पप संस्कृतिमा प्रसिद्ध स्किस्क्रैपर
भवनको धेरै माथि अघि एक अवलोकन डेक थियो, केही वर्ष पछि एक रेस्टुरेन्ट यस स्थानमा देखा पर्यो। तर ठूलो डिप्रेशनको समयमा यस उद्यमले तिर्न सक्दैन। रेस्टुरेन्ट को स्थान एक निजी क्लब द्वारा लिइएको थियो। भवन को माथिल्लो फर्श मुख्य रूप देखि देखने को लागि योजना बनाइयो, र यसैले छतहरु लाई कम र कम छ। आलोचकहरूले प्रारम्भिक संरचना संरचना "दृढ दृश्य" भनिन्, तर मैनहट्टनका मानिसहरू उनीहरूको मनपर्छ।
स्किस्क्रैर क्रिसलर बिल्डिंग, यस प्रसिद्ध भवन को फोटो प्रभावित। पहिला यो गिलास बनाइएको ताजको साथ छतको ताला लगाएर योजना बनाईएको थियो। यो पनि खिचोका प्यानहरू ठूलो बनाउन र थोडा थोपा बनाउन चाहन्थे, निर्माणको प्राणी को एक अदृश्य उपस्थिति दिन को लागि, जस्तै हवा हावा र माथि बढ्न प्रयास गर्न।
तर प्रारम्भिक मस्यौदा अस्वीकार गरियो। त्यस समयको लागि यस्तो उपक्रम अत्यन्त असामान्य थियो, र यसको कार्यान्वयनले धेरै खर्चहरू गर्न आवश्यक छ। अन्तिम परियोजना क्रिसलर बिल्डिंग कार "क्रिसलर" शैलीमा डिजाइन गरिएको थियो। यो ध्यान दिन योग्य छ कि भवन को व्यक्तिगत तत्व पछि यस कम्पनी को मिसिनहरु को नयाँ मोडेल मा स्थानांतरित गरियो।
यार ... यो को हो?
उनको भतिजी देखि उनको जन्मदिन मा चाची को शुभकामनाएं कसरि बधाई छ
स्टेरियोटाइप के हो र के यो छुटकारा पाउन आवश्यक छ कि?
नरिवल - एक फल वा नट? नरिवल, क्यालोरी को उपयोगी गुणहरू
नीलो लेक (टुला क्षेत्र): एक संक्षिप्त विवरण
शौचालय Ifo Frisk - वर्तमान स्वीडिश गुणस्तर
किन बालिका केटाहरू तिनीहरूले भन्दा चलाख छन् भन्ने लाग्छ?
Gynecology। Endometriosis: यो खतरनाक छ?